I-Villa Moira-30 m ukusuka elwandle ap.3. - I-Airbnb
I-Villa Moira-30 m ukusuka elwandle ap.3.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMoira
Le yiflethi okanye indlu ekwicomplex entle ekwiimitha eziyi-30 ukusuka elwandle, nemizuzu eyi-10 ukusuka embindini wesixeko sasePula nazo zonke iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi basekuhlaleni. Iflethi ime kumgangatho wesibini apho unokubona kakuhle ulwandle.
Iiflethi okanye izindlu ezikwicomplex zilungele iholide kunye nosapho okanye abahlobo. Ixhotyiswe kakuhle, itofotofo kwaye inetreyini entle, elungele ukuba nesidlo sakusasa ekuseni okanye isidlo sangokuhlwa sokuphumla ekutshoneni kwelanga. Unxweme lulungele abantwana nabantu abadala. Idolophu yasePula inika abenzi beeholide iindawo ezininzi zenkcubeko kunye neendawo ezahlukahlukeneyo zokuzonwabisa kubantu abancinci nabadala. Iivenkile kunye neevenkile zokutyela zikufutshane nendlu. Indawo yokupaka iyafumaneka phambi kwendlu.
Le ndlu ikwindawo ehlala abantu, ijikelezwe zizindlu ezinendawo yokuphola ezifanayo. Kwiindawo ezikufutshane uneevenkile zokutyela ezimbalwa ezintle, iibhari zaselwandle, iinkundla zethenisi, iindawo ezahlukeneyo zokudlala elwandle. Kukho indawo yokuthenga esandul 'ukuvulwa enevenkile enkulu kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo.